Ciidan Ethiopian ah oo buux dhaafiyay degmada Buulabarde (Aqri sababta) |
Ciidan Ethiopian ah oo buux dhaafiyay degmada Buulabarde (Aqri sababta)
Wararka laga helaayo degmada Buulabarde, ayaa sheegaya in halkaasi maanta ay soo buux dhaafiyeen Ciidamo ka tirsan AMISOM oo wata gaadiidka dagaalka.
Dadka deegaanka ayaa soo sheegaya in wadooyinka lagu soo daadiyay Ciidamo farabadan oo Ethiopian ah kana Tirsan AMISOM, kuwaasi oo baaritaano iyo xarigba u geystay dadka deegaankaasi ku nool ee looga shakiyay inay taabacsan yihiin Alshabaab, waxaana la soo sheegayaa in gaadiidkooda ay ku xireen dhammaan wadooyinka Degmadaasi gala iyo kuwa ka baxa.
Maamulka Degmadaasi ayaa sheegay in sababta ciidanka deegaanka loo keenay ay tahay sidii ay gar gaar la keenay degmada u gudbin lahaayeen, islamarkaana ay u koontarooli lahaayen qaabka gargaarkaasi loo qeybinaayo.
Sargaal ka tirsan Maamulka Degmadaasi oo arrintaasi warbaahinta uga warbixinaayay ayaa waxa uu yiri “Ciidanka aad bay u badan-yihiin waxaay noo sheegeen mas’uuliyinta la socota inay gudbin doonan gar gaar la keenay oo loo wado Maxaas iyo Ceelbuur ”
Sidoo kale, Duqa degmada Buulabarde,Cismaan Geeddi oo la hadlay warbaahinta dhankiisa waxuu sheegay in ciidamada Itoobiyanka ah ee qeybta ka ah AMISOM ay yihiin kuwa loogu talo-galay in ay gargaarka la geenayo Ceelbuur iyo Maxaas ay galbiyaan.
Dhanka kale, degmada Buulabarde ayaa waxaa dhowr mar leysu dayay in la gaarsiiyo gargaar raashiin, balse nasiib daro waxaa gargaarkaasi wadada u galay Maleeshiyaadka Alshabaab oo dab qabadsiiyay gargaarka iyo gaadiidkii siday.